Fikradda Apple Watch oo leh naqshad la mid ah iPhone 12 | Waxaan ka socdaa mac
Fikradda Apple Watch oo leh naqshad la mid ah iPhone 12
Fikradaha, fikradaha waa, iyo marar badan, way ka hor marayaan waqtigooda, in kastoo had iyo jeer aan ahayn. Waxaan aragnay fikradaha bilaa xadka ah ee iPhone sanado badan, oo leh shaashada labada dhinacba (iyo xitaa gadaal), naqshadaha u dhigma mustaqbalka fog. Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale helnaa fikrado macquul ah oo la mid ah tan aan maanta ku tusno.
Naqshadeeyaha Wilson Nicklaus (@ Wilson_boi_101) ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay dhowr fikradood oo ku saabsan sida uu u maleyn karo inay noqon karto jiilka xiga ee Apple Watch, Naqshad si cad u dhiirrigelisay tan cusub ee iPhone 12 ee laga dhaxlay iPad Pro kala duwan oo leh geesaha fidsan.
Apple waxay soo bandhigtay nashqaddan iyada oo la bilaabay iPad Pro-ka 2018, oo ah naqshad geesaha fidsan. sida midka laga helay iPhone 4 iyo iPhone 5. In kasta oo xilligan la joogo aysan jirin wax caddeyn ah oo tilmaamaya isbeddel ku yimid naqshadda Apple Watch, Wilson Nicklaus wuxuu abuuray naqshad, in si daacad ah loo sheego, ay tahay wax soo jiidasho leh, wax kale ayaa ah inay tahay mid la taaban karo.
Aniguna waxaan leeyahay wax ku ool ah, maxaa loo leeyahay a geeska fidsan ee ku lifaaqan curcurka uma muuqdo mid aad u fiican. Waxaan kaliya u baahannahay inaan fiirino saacadaha had iyo jeer soo gaara suuqa, dhammaantood waxay leeyihiin geesaha wareegsan, raaxada ay bixiyaan markay xirtaan marka ay la xiriiraan curcurka.
Markii la bilaabay Apple Watch Series 4 ee 2018, Apple waxay dib u habayn ku samaysay naqshadeeda ku darista shaashad ka weyn haynta naqshad isku mid ah. Taasi waxay noqon kartaa waqtigii ugu fiicnaa ee dib loo cusbooneysiiyo naqshadeynta lana hirgeliyo isla wixii lagu soo bandhigay iPad Pro.
Fikradani ma arki doontaa iftiinka? Shakhsiyan, waxaan dhihi lahaa maya, raaxo darrada ay naqshadeynta fidsan ee geesaha ay u sababi karto curcurka, laakiin taasi micnaheedu maahan in fikraddani aysan qurux badneyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Fikradda Apple Watch oo leh naqshad la mid ah iPhone 12
Apple Care + ee loogu talagalay AirPods Max cusub for 59 oo keliya
Astaamo sir ah oo aamin ah kana ilaaliso sawiradaada iyo fiidyowyadaada Mac aamin ajnabi